Latest News | News Filmy | Page 167
‘सेतो बाघ’मा राजाराम पौडेलको ईन्ट्री
यस पटक नयाँ आर्टिष्टहरुसँग मात्र काम गर्ने उद्घोष गरेका नीर शाहले ‘सेतो बाघ’मा राजाराम पौडेललाई ईन्ट्री गराएका छन् । झण्डै ३० प्रतिशत छायाकंन सकिएको अवस्थामा राजारामको ‘सेतो बाघ’ सेटमा ईन्ट्री भएको हो । ‘भोला क्यारेक्टरमा उहाँको खाचो महशुस भयो त्यसैले उहाँसंग काम सुरु गरिएको हो ।’ अत्यन्त ब्यस्त रहेका बेला सुटिङ सेटमा शाहले प्रतिक्रिया दिएका छन् । शाहका अनुसार फ्रेम भब्य देखाउन थप दुई चर्चित अनुहारलाई पनि ‘सेतो बाघ’मा खेलाईने तयारी भईरहेको छ ।
अधकट्टी मुहूर्त/२९ देखि फ्लोरमा
अन्तत : महिनौको आन्तरिक तयारीपछि अधकट्टीको शुभ मुहूर्त भएको छ । विभिन्न फण्डाहरुको ट्वीष्ट स्टोरी रहेको यो सोसल कमेडी फिल्मको कथा कान्तिपुर साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक सुवास ढकालले तयार गरेका हुन । ढकालकै हातबाट नरिवल फोडी फिल्म मुहूर्त कार्यक्रमलाई पूर्णता दिईएको थियो ।
डन मनाङेको लगानी रहेको ‘वान वे’ पोष्टर रिलिज
March 7, 2014 1:51 am
डन दीपक मनाङेको लगानी रहेको फिल्म ‘वान वे’ को फष्टलुक पोष्टर बाहिरिएको छ । सुरज सुब्बा (नाल्बो) निर्देशित यस फिल्ममा मनाङेका छोरा सिदार्थ, गायक रविन तामाङ एवं नयाँ हिरोइन माला सुब्बा मेन लिडमा छिन् । पोष्टर सार्वजनिक भएपनि रिलिज मिति फाईनल नभएको यस फिल्मलाई फ्रन्ट लाईनमा बसेर निर्माता संघका अध्यक्ष राजकुमार राईले प्रोड्यूस गरेका हुन ।
टिभी ईन्टरभ्यू : स्वीट हार्ट प्रियंका कार्की बोल्नमा कति प्रखर ?
नयाँ पुष्ताका हिरोइनहरुमा ईन्टरभ्यू दिन जान्नेहरुको लिष्ट निकाल्ने हो भने निशा अधिकारी, बिनिता बराल, केकी अधिकारी, रिमा विश्वकर्मा र प्रियंका कार्की अग्रपंक्तिमा आउछन् ।
पछिल्लो समय सर्वाधिक ब्यस्त हिरोइनको ट्याग भिरेकी स्वीट हार्ट प्रियंकाको ब्यस्तता बढेसंगै सफलता पनि देखिन थालेको छ । उनले खेलेको पछिल्लो फिल्म ‘झोले’ले सफलताको ट्याग भिरिसकेको अवस्था छ भने पहिलो फिल्म ‘मेरो बेष्ट फ्रेण्ड ‘ पनि अन्तत रिलिज मैदानमा आईसकेको छ । बैशाखमा ‘मेरो बेष्ट फ्रेण्ड’ रिलिज अघि चैत्र २८मा नाईँ न भन्नु ल २ पनि रिलिज हुँदैछ उनको ।
पढाई चाँहि डाइरेक्सन तर बने प्रोड्यूसर !
‘प्रतापले आगो बाल्छ ।’ यी प्यूठाने युवा सुरूमै जोशिए । भोली प्रिमियर हुने र पर्सिबाट देश-विदेशमा लाग्ने आफ्नो दोस्रो फिल्म ‘ऋतुु’को प्रचार प्रसार एवं रिलिज तयारीमा ब्यस्त अपिल विष्ट किन यति जोशिए त ? चिकित्सकका छोरा अपिलले पढेका चाँहि फिल्म डाइरेक्सन हो तर बने प्रोड्यूसर । ‘प्रताप’ लाई लिएर जोशिनुको कारण चाहि अब उनी आफूले पढे अनुसारको काम गर्दै छन् । हो उनी आफ्नो आगामी प्रोजेक्टबाट डाइरेक्सनमा हात हाल्दै छन्। अरूका बाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर इन्जिनियर बनाउने इच्छा पाल्दा यीनका पिता उनलाई हिरो बनाउने इच्छा राख्थे ।
डेढ दशक पछि पुनः फिल्म निर्देशनमा मोहन निरौला
२०५२ सालमा शिव श्रेष्ठ तथा विपना थापालाई लिएर जन्मभूमि निर्देशन गरी सुस्ताएका निर्देशक मोहन निरौला डेढ दशकपछि फिल्म निर्देशनमा फर्किएका छन् । हजार भन्दा बढी टेलिसिरियल एवं फिल्मका लेखक तथा निर्देशक समेत रहेका निरौलाले पुरानै टाईटल जन्मभूमि माथी नयाँ कथामा फिल्म बनाउन लागेको जानकारी काष्टीङ डाईरेक्टर शान्तिप्रियले दिएका छन् ।शान्तिका अनुसार फिल्मको औपचारिक निर्माण घोषणा कलाकार गोप्य राख्दै आउँदो शनिबार गरिने छ ।
चैत्र २८ पछि बैशाख १२मा प्रतिष्ठाको लडाई !
March 5, 2014 6:01 am
हो गएको पौष २६ अनि आउदै गरेको चैत्र २८को मिति पश्चात बैशाख १२ गते ठूलो ब्यवसायिक लडाई हुने निश्चित भएको छ । पौष २६मा ६ एकान ६, बितेका पल, पराई लगायत अन्य केही फिल्महरु एक साथ रिलिज हुँदा देखिएको ब्यापार असन्तुलन चैत्र २८ मा ‘नाईँ न भन्नु ल- २’ र ‘मनले मनलाई छुन्छ’ बीच पनि देखिदैछ । यो मितिमा रिलिज भईसकेका भोजपुरी फिल्म डविङ गरी सुनील मानन्धरले स्वदेशका फिल्म माथी आक्रमण गर्ने योजनामा पनि रहेको बताईन्छ । उनले यस्तो गतिविधि ‘झोले ‘ रिलिज हुदाँ पनि गरेका थिए । सस्तोमा भोजपुरी फिल्म किनेर महंगा नेपाली फिल्म माथि प्रहार गर्ने उनको यो गतिविधिका कारण धेरै भन्दा धेरै निर्माताहरु रुष्ट बनेका छन् ।